Momba anay | Wenzhou Lianteng fonosana milina Co., Ltd.
Wenzhou Lianteng fonosana milina Co., Ltd.
Ny fahamendrehana, ny pragmatika, ny tsara ary ny zava-baovao
Mamorona serivisy kilasy voalohany ho an'ny mpanjifa Mamorona tombony be sy tombontsoa lehibe ho an'ny mpiasa
Ny olona rehetra, matetika ato am-poko.
Wenzhou Lianteng fonosana milina Co., Ltd.dia nanolo-tena ho amin'ny fampandrosoana, famokarana sy ny varotra fitaovana fonosana fonosana, dia matihanina an-trano mirotsaka amin'ny sakafo, fanafody sy ny fonosana automated fonosana mandeha ho azy orinasa mandroso. Lian Teng hanome anao ny famolavolana, ny fanamboarana, ny fametrahana, ny fanendrena, ny fiofanana, serivisy aorian'ny fivarotana, toy ny serivisy amin'ny alàlan'ny lamasinina. Lian teng dia nivoatra ho famolavolana, famokarana, varotra, fikarohana ary fampandrosoana amin'ny iray amin'ireo orinasa maoderina avo lenta.
Ny famokarana sy ny varotra masinina famenoana anay, ny masinina fametahana volo, ny milina fanoratana, ny milina fanaovana pirinty kaody daty, ny masinina famehezana mandeha ho azy, ny faritra misy ny milina fanadiovana ary ny tetikasa hafa feno. Miaraka amin'ny filan'ny tsena sy ny fampandrosoana, ary manatsara hatrany ny filozofia momba ny fandraharahana, ny fifantohana amin'ny fahatsiarovan-tena amin'ny marika, dia lasa tanjaka iray izao
ny milina fonosana anatiny sy ny mpanamboatra matihanina. Ny vokatra dia be mpampiasa amin'ny ronono, labiera, sakafo, fanafody, zava-pisotro, ary indostria simika. Amin'izao fotoana izao ny vokatra dia aondrana any Eropa sy Etazonia ary Azia atsimo atsinanana ary ny taratra ny firenena, ataon'ny mpanjifa vaovao sy taloha ary ny fanohanan'ny fiarahamonina.